केपिलासगढी गाउँपालिकाका प्रमुख कृष्णकुमार राईलाई छ प्रश्न ? – Nirantarkhabar
१. समृद्ध केपिलासगढी गाउँपालिका निर्माणको लागि के कस्ता योजना ल्याउनुभएको छ ?
सर्वप्रथम मेरो धारणा राख्ने अवसर दिनुभएकोमा हलेसी खबर डटकमलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु । म निर्वातिचत भएको अवधिदेखि निरन्तर विकासको काममा लागिरहेको छु । केपिलासगढी गाउँपालिकाको समग्र विकासको लागि विशेष गरेर शुसासन कायम गर्नु नै मेरो मुख्य जिम्मेवारी हो । देशमा २० वर्ष जनप्रतिनिधि विहिन अवस्थालाई जनताले धेरै संकास्पद रुपमा अहिलेसम्म हेरिरहेको अवस्था छ । त्यसलाई हामीले जुन संघियताको मुल मर्मलाई जनता समक्ष पु¥याउन यहाँका विकासका पूर्वाधार देखिलिएर सामाजिक आर्थिक लगायतमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यक देखेको छु । मुख्य गरेर हामीले पूर्वाधारको हिसाब किताबमा हामी हर चिज सडक यातायातसँग जोडिएको हुनाले हामीले केपिलासगढी गाउँपालिकालाई समृद्ध बनाउन मुख्य सडक यातायातलाई फोकस दिएर प्रत्येक वडामा एम्बुलेन्स पुग्नुपर्दछ किन भने जनताहरु बिरामी हुँदा हुने खानेले हेलिकोप्टर चार्टर गरेर जाने नहुनेले अकालमा मृत्यु हने कुरालाई ध्यानमा राखेर हर क्षेत्रमा यातायातको पहुँच पु¥याउने प्रयास गरेका छौं र दोश्रो समस्या विद्युतको रहेको छ र दुई वर्षभित्र यस गाउँपालिकाको प्रत्येक घरमा विस्तार गर्ने योजना रहेको छ । स्वास्थ्यको क्षेत्रमा अबका पाँच वर्षभित्र यस पालिकामा २५ शैयाको अस्पताल बनाउने र गरीब तथा निमुखा वर्गमा पु¥याउने लक्ष्य लिएको छु । विकास र परिवर्तनको कुरा गर्दा शिक्षा पनि महत्वपूर्ण रहेको छ । सबै नागरिकको पहुँचमा शिक्षा पु¥याउन एक वाड एक विद्यालय बनाउने अवधारणा लिएका छौं र यसलाई कार्यान्वयन गराउन गाउँ शिक्षा समिति पनि गठन गरेका छौं । विभिन्न पिछडिएका वर्गका बालबालिकालाई कसरी विद्यालय पठाउन सकिन्छ भनेर बालबालिकालाई झोला वितरण लगायतका कामहरु गरेका छांै । विपत जोखिमको लागि कुनै विपतमा परेर ज्यान गयो भने ५० हजारदेखि ८० हजारसम्म सहयोग गर्ने कृषिमा फोकस गरेर अगाडि बढेका छौं । सहुलियतमा मल बीउबिजन वितरण गर्ने र आधुकिरुपमा कृषि खेतीतर्फ जनतालाई उन्मुख गर्ने योजना बनाएका छौं । केपिलासगढीको समग्र भन्नु पर्दा जनता मुखी बनाउने, पारदर्शी बनाउने, भ्रष्टाचारलाई निरुत्साहित गर्ने पक्षमानै हाम्रो ध्यान खिचिएको छ ।
२, यहाँले समृद्ध पालिका बनाउने योजना सुनाउनु भयो यी योजना कार्यान्वयन गराउन के चुनौति रहेका छन् ?
समृद्ध गाउँपालिका बनाउने अभियानमा समस्याहरु धेरै रहेका छन् यसमा पनि प्रमुख समस्या कर्मचारी अभाव नै रहेको छ । असार १६ गते पदस्थापना भएदेखि यता गाउँसभा साउन १९ गते गरियो र गाउँसभाबाट पारित बजेट खर्च गर्न काम गर्न बजेट भएपनि प्राविधिक समस्याले काम समयमा गर्न सकिएन । साउनदेखि मंसिरसम्म काम सुरु गर्न सकिएन कर्मचारी नभएकै कारण र अर्को समस्या कुनै पनि बैंक यस पालिकामा नहुनु पनि ठूलो समस्याको रुपमा रहेको छ । विभिन्न योजनाहरुको खाता खोल्नुदेखि योजनाका कामहरुको भुत्तानी गर्दा जिल्लासम्म धाउनुपर्ने समस्या रहेको छ । यो समस्यालाई हल गर्न प्रयास गरिरहेका छौं । चुनौतिहरु धेरै रहेका छन् पुरानो तरिकाले चलेको काम काज नयाँ ढंगबाट गराउन खोज्दा समस्या भएको छ । सदरमुकामसम्म जोड्ने एउटा पनि पक्की सडक छैन र ठूलो समस्या रहको छ । प्रविधिको समयमा कुनै ईमेल ईन्टरनेट यहाँ चल्दैन र अन्य ठाउँमा के भइरहेको छ भन्ने कुरा सहज रुपमा थाहा पाउन कठिन छ । टेलिफोनको टावर व्यवस्थित नहुँदा फोन गर्न नै यहाँका जनताले धेरै सास्ती भोग्नुपरेको छ । सम्भावना धेरै भएको गाउँपालिका हो यो ठाउँ र चुनौतिहरु पनि धेरै नै छन् ।
३, धेरै समस्याहरु यहाँले बताई सक्नुभयो र राज्यको तर्फबाट के भए सम्मृद्ध पालिका बनाउन टेवा पुग्थ्यो भन्ने यहाँलाई लाग्दछ ?
यो विषयमा पालिकाले सानातिना समस्या मात्र सामाधान गर्न सक्ने हो । हामीसँग १२ करोड विकासे बजेट र यसबाट धेरै कुरा हेर्नु पर्दछ । हामीसँग सम्भावना धेरै रहेको छ । यो गाउँपालिकामा हाईड्रोपावरसँग सम्बन्धित ठाउँहरु धेरै छन् । यसमा पनि सरकारले ध्यान दिनु जरुरी छ । मुख्य गरेर यसपालिकाबाट अर्को पालिकाहरु जोड्ने खोलामा ५ ठाउँ भन्दा बढी मोटरेवल पुलको आवश्यकता रहेको छ । सडकलाई कालोपत्रे गर्नलाई सरकारको माथिल्लो निकायबाट बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने जरुरत रहेको छ भने, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा भन्नु पर्दा मान्छेको मृत्यु हुँदा पोष्माटर्म गर्नुपर्दा काध पिल्साएर जिल्ला अस्पताल लैजानुपर्ने समस्या रहेको छ सरकारले हरेक पालिकामा तत्काल एमबिबिएस डाक्टरको व्यवस्था गरि स्वास्थ्य क्षेत्रको समस्यालाई समाधान गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
४, पर्यटनको सम्भावना के छ र यस पालिकाको आयको मुख्य श्रोत के हो ?
पर्यटनको सम्भावना प्रवल छ जस्तै सालपा पोखरी खोटाङ, भोजपुर, संखुवासभार सोलुखुम्बुको सिमानामा पर्छ । यहाँ वर्षमा दुई पटक ठूलो मेला लाग्ने गर्दछ । सालपा पोखरीसम्म मोटरेवल सडकको पनि हामीले योजना अगाडि बढाएका छौ । सालपा पोखरी यस क्षेत्रको ठूलो धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने योजना बनाइएको छ । त्यसपछि ढालतरवार छ त्यो पनि पुरानो विराषत बोकेको पर्यटकीय ठाउँ हो । त्यो वडा नं २ खार्तम्छामा पर्दछ । अन्य पर्यटकीय भन्नाले भिर मौरीको कुरा छ यहाँ । भिर मौरी बिरलै पाइने भएकोले यसको संरक्षण गरियो भने पर्यटकीय ठाउँ बनाउन सकिन्छ । भिर मौरीलाई महोत्सव गरेर हनिहन्टिङ गर्ने वतावरण गरेर प्रचारप्रसारमा ध्यान दिइयो भने यहाँ पनि सम्भावना रहेको छ र दिप्सुङमा रहेको बाहाने पोखरी पनि पर्यटकको लागि महत्वपूर्ण ठाउँ हो । यस पालिकामा रहेका पर्यटकीय क्षेत्रको संरक्षण र सम्बद्धनको लागि स्थानीय सरकारको बजेटले नभ्याउने भएकाले राज्यको मुख ताक्नु पर्ने अवस्था छ ।
५, जस्तो संधियता कार्यान्वयनसँगै स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेको छ भन्ने आरोप लागेको छ । यसलाई शुन्यतामा झार्न के गर्नुभएको छ ?
भ्रष्टाचार भन्ने चिजको चाहि म पहिलादेखि नै विरुद्धमा लाग्ने मान्छे हो । म भूपु आर्मी भएकाले पनि मलाई बाँच्न पुग्ने पैसा मसँग छ र माशिक पेनशन आउने भएकाले जीवन भर मैले राज्यलाई लुट्नुपर्छ यो योजनाबाट यति कमिशन खानुपर्छ भन्ने कुनै सोच लिइन । म जिन्दगीभर लिन्न र अरुले लिएको पाए भने छोड्दिन पनि । यो मूलुकमा विकास नहुनुको प्रमुख कारण भ्रष्टाचार नै हो । विभिन्न काम गर्दा कमिशन लिएर गर्नु भनेको अपराध हो । यसलाई नियन्त्रण गर्ने शुन्य सहनसिलता नै हो र कसैले भ्रष्टाचार गर्छ भने म सम्बन्धित निकायमा लगेर कार्वाही गराउन प्रत्तिबद्ध छु । कसैले भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण दिनु हुदैन भन्ने पनि यस हलेसी खबवर डटकममार्फत केपिलासगढी गाउँपालिकाका जनतालाई आह्वान गर्छु । किन भने आमाको दूध चुसेर हुदैन बाउको घुँडा चुसेर हुदैन । तपाईहरुले आज भ्रष्टाचार गरेर दुईचार पैसा कमाउनु हुन्छ । त्यो पैसाले कसैलाई फाब्दैन र भगवान छ भने भगवानले पनि भ्रष्टाचारीलाई सजाए दिन्छ । आफ्नो पसिना चुहाएर खानु होस कसैले दुई पैसाको लोभ गरेर नहिड्नुस मेरो कार्यकाल भरि एक रुपैयाँको पनि तलमाथि भएको पाए भने सिधै कार्वाहीको दायरामा ल्याएर जनतासामु लगेर नङ्ग्याउछु ।
६, अन्त्यमा बताइ दिनुस् पालिका र वडाको सम्बन्ध कस्तो रहेको छ ?
यो गाउँपालिको अध्यक्ष भएको नाताले जस अपजस मैसँग आउछ । त्यसो भएकाले हरेक कुराको रेखदेख सिधा रुपमा मैले गरेको छु । वडा अध्यक्षहरुको हकमा भन्नुपर्दा शिक्षित हुनुहुन्छ । यसमा म धेरै खुसी छु । उहाँहरुसँग सल्लाह सुझाव गरेर नै अगाडि बढेको छु । मेरो र वडाको नङ र मासुको जस्तो सम्बन्ध रहेकोले मलाई काम गर्न धेरै सहज भएको सबैमा जानकारी गराउँछु र वडाको सहयोगमा नै यो पालिकालाई पाँच वर्षभित्र जिल्लाकै नमूना पालिका बनाउन लागेको छु । यसमा सबैको सहयोग आवश्यक छ ।
सडक बत्तिमै अनुहार चिन्ने जासुसी क्यामरा जडान गर्ने सिंगापुरको तयारी